Ukuthuthukiswa kanye nokusebenza kwe-JJD kwi-Pressurization esizwa yigesi
Isigaba Sokucwaninga Nentuthuko i-JJD sesungule iphrojekthi yokuthuthukisa isikhunta kanye nenqubo yokuphonsa i-aluminium alloy casting, futhi nange-pressertisation ye-inert-gas, ukuxazulula ngokuphelele izindaba ezifana nezimbobo zegesi ezibangelwa yi-sandbever yaphezulu, kanye nemikhaba ye-shrinkage kudalwe ezindaweni lapho ukushuba kwezinto ezibonakalayo kungalingani. Isigaba siphinde safaka isicelo selungelo lobunikazi elihambisanayo.
Izithombe zibonisa amagobolondo emishini ye-elekthronikhi.
1. Ukuqhathanisa imikhiqizo phezu kwesihlabathi
1) Bekunemikhiqizo emine, kufaka phakathi emibili ebikade icindezelwe yi-0.5MPA Pressurization, neminye emibili ebingakenzi. Futhi ukuqhathanisa kwenziwa ngemuva kwemizuzu emibili yokugobhoza kwesihlabathi.
Emikhiqizweni ebingakaze yenziwe ngaphansi kwe-Pressurization, izimbobo zegesi zagxiliswa ngaphansi kwezimbotshana.
Emikhiqizweni ebikade yenziwa yi-Pressurization esiza yigesi, inqubo yokubheka isihlabathi ayizange ibangele izimbobo zegesi ezisobala, futhi azikho izimbobo zegesi ezingaphezulu zemikhiqizo
2. Ukuqhathanisa izingxenye zesiphambano zemikhiqizo
Izingxenye eziguqukayo zemikhiqizo ezazingakaze zibhekane nengcindezelo
Izigaba eziguqukayo zemikhiqizo ebekade zenziwe ngaphansi kwengcindezelo
Isiphetho ngokuya ngokuqhathanisa idatha: i-Pressurization ilethe ukuthuthuka okukhulu.
Ingxenye ye-longitudinal yemikhiqizo ebiqhutshwa yi-Pressurization
Le nqubo entsha ingathuthukisa hhayi kuphela isivuno okungenani sama-20%, kepha futhi nempumelelo yokubumba noma isilinganiso sokukhiqizwa kwamagobolondo emishini emisha yamandla kagesi, kanye nokunye ukuphonswa kwamandla okukhanya okucishe kube namandla obumba Izidingo zokuqeda ukushisa okuphezulu noma okunzima ukubumba. Le nqubo futhi ingathatha isikhundla sokuphonswa kwengcindezi ephansi ukuze kwandiswe ukusebenza kahle nokukhiqiza izindleko eziningi zokutshala amakhasimende.
Isikhathi sokuthumela: Jun-24-2020